“Minisitera Vaovao Ao Frantsa Hisahana Ny Fitiavan-Tanindrazana Sy Ny Fandroahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Septambra 2018 13:30 GMT
Tsy tian'ilay Blaogera miteny Frantsay “Et Si Nous Parlions” mihitsy ilay Ministera vaovao napetraky ny Filoha Nicolas Sarkozy hisahana ny Fifindramonina, ny Fampidirana, ny maripamantarana ny firenena, ary ny fiaraha-mivoatra. Ka aleony antsoina hoe “Ministeran'ny Fitiavan-tanindrazana sy ny Fandroahana” (Fr).
Io anarana apetaka amin'ilay ministera io dia manambara ankolaka ny tena tanjona fonosin'ilay izy. Kainin'ireo vondrona frantsay mpiaro ny zon'olombelona ny fironan'ilay ministera amin'ny fankahalàna vahiny ary valo ireo mpahay tantara ara-pifindramonina no nilaza fa “tsy anjara andraikitry ny fanjakana Demokratika ny mamaritra ny maripamantarana.”
Tokony hitsikera bebe kokoa an'io minisitera vaovao misahana ny fifindramonina io ny Haino aman-jery Frantsay.
Kianin'ny Et Si Nous Parlions ny fandrakofam-baovao Frantsay momba ny governemanta vaovaon'i Sarkozy sy ilay minisitera vaovao misahana ny fifindramonina, ny fihetsiny “andraso dia ho hita eo, manome vintana an'i [Sarkozy] “, raha ho azy, mazava ny tanjona sy ny mety ho fanararaotan'ity ministera ity.
Io ministera io no hafa indrindra ao Eoropa. Na ireo firenena sahy nampihatra ny politikan'ny elatra farany havanana aza mbola tsy namorona ministera tahaka izao. Amin'ny fomba fijery ara-politika, inona no ilàna ny fananganana ministera ho an'ny 8%'ny mponina ? (+ 0,4% ny mpifindra monina tsy manana taratasy?). Maninona koa raha asiana ministeran'ny pelaka ? na ho an'ny vehivavy iharan'ny herisetra (10%?), ireo bimbos, na ho an'ny sembana? … Raha araka ny sarinteny, hanaraka ireo vahiny mivoaka sy miditra amin'ny antsipirihany izany ity ministera ity, ekena, fa indrindra indrindra hanavaka ny vahiny sy ireo nomena zompirenena Frantsay amin'ireo hafa.
.. [Ny gazety] mangataka antsika hanakatona ny masontsika ary hiandry. Hiandry inona? Ny ratsy indrindra ?…
Maro amin'ireo mpamaky an'i Et Si Nous Parlions no nizara ny ahiahin'ilay bilaogera momba ny fiovan'ny fandraisana ireo mpifindra monina any Frantsa amin'izao governemanta vaovao an'i Sarkozy izao.
Fifindràmonina toy ny mpisolo vaika ny ankalana & fitondra-mitanila ataon'i Frantsa
Hoy ny Citizenofutopiatownships :
Hatramin'izay ny fifindraàmonina no nataon'ny politika tao Frantsa ho mpisolo vaika ny ankalana, politisiana izay tsy te-hiaiky hoe diso tamin'ny fiheverany ny Vondrona Eoropeana satria tsy vonona tamin'izany akory ny vahoaka. Manana olana eo amin'ny fikarohana asa ny Frantsay ? Tsy fahadisoan'ireo mpifindra monina izany ! … Tsy mahagaga ahy raha i Sarkozy satria fantatro ny heviny. Ho diso fanantenana eo ireo vahoaka Frantsay ireo satria tokony hovaliana habibiana ny hadalàna. Nandroaka ny Indiana sy ny Pakistaney i Idi Amin tao Ogandà ary dia nisy famaizana natao tamin'ny fiandrianan'ny fireneny. Ka angamba fotoana izao hamoazana indray ny fitiavan-tanindrazana mivaivay ananantsika. Heverin'i Frantsa angamba fa malalaka izy ny hanaiky sy handà araka izay tiany ireo mpifindramonina. Saingy aoka tsy hoadinon'i Frantsa fa misy Frantsay mpifindramonina ihany koa any amin'ireo tany niavian'ireny olona noroahany hiverina ireny. Heveriko fa tokony hodinihan'ny Tandrefana ny resaka fiaraha-mivoatra raha tsy tiany hihitatra ny fifankahalàna eo amin'ny olona satria tsy matanjaka be toy izao ny firenena Eoropeana raha tsy noho ireo Afrikana madinika ireo.
Na i Sarkozy koa aza manana tantaranà mpifindramonina.
Mihevitra i Citizenofutopiatownships fa avy amin'ny tsy fandriany fahalemana manoloana ny maha-taranaka mpifindramonina azy io fanapahankevitra henjana raisin'ny filoha momba ny fifindramonina io.
Ny tena marina, mihevitra aho fa izay tena nahatsiaro nijaly vokatry ny toerana maha “mpifindra monina” azy tahaka ny voalazan'ilay filoha vaovao ao Frantsa no tena masiaka amin'ireo vahiny.
Ambarako mandrakariva fa modely malefaka an'i Le pen i Nicolas Sarkozy. Tsy afaka ny nifidy an'i Lepen ny Frantsay, ka naleony nisafidy modely malefaka kokoa izay mbola poizina ihany. Ary minoa ahy ianareo, mampahatsiahy ahy an'izay Hitler izay izy, izay araky ny fantatsika rehetra dia nankahala ny Jiosy nony farany noho ny fiaviany [Jiosy].
Ary toy izay ihany koa, nampitahain’ i Mangosutou ny psikolojian'i Sarkozy sy ny an'i Adolph Hitler ary ireo mpitarika malaza hafa nanana fiaviana avy any ivelany sy ireo fironana jadona :
Jiosy avy ao Hongria i Sarkozy (Grika ny reniny) teraka tao Frantsa; tsy dia manana firaiketana marina amin'ny Frantsa izy, afa-tsy nyjus soli, fahafahana mitoetra ao tahaka ireo mpiavy rehetra; Alemaina – Frantsay i Pinochet, teraka tao Chili ary i Fuji-Mori izay nitsaoka tao Japana tany nahaterahany taorian'ny vono olona nataony tany amin'ny tany nandray azy.
Tsy mazoto ny hanohitra an'i Frantsa ireo mpitarika Afrikana
Hoy i fab :
Tsy maninona izany. Avelao Sarkozy sy Frantsa hanao izay tiany!!! Ny ahy ny tena maharikoriko ahy, ny tsy fisian'ny fanehoankevitra avy amin'ireo firenena Afrikana izay manohy manandratra ny teratany [Frantsay] ho toy ny ‘tompon-dry zareo’. Mihevitra aho fa raha toa ka nisy ny fitia nifamaly dia mety mba niverina tamin'ny laoniny ny zavatra rehetra.
…mba jereo fotsiny ny fanajantenan'ireo mpitondra Afrikana miteny Anglisy dia ho hitanareo ny hantsana lalina misy eo amin'ny Sassou, Biya, Bongo ary etsy andaniny Obansanjo [Nizeria], Mbeki [Afrika Atsimo] ary Mugabe [Zimbaboe] etsy ankilany.
Fihetsika manahirana ampiasàna ny fatra isam-paritra (quota ethnique)
Soritsoritan'i Et Si Nous Parlions ireo andran'ny governemantan'i Sarkozy hanoherana ireo fiampangana momba ny fankahalana vahiny na fanavakavaham-bolonkoditra miaraka amin'izay heveriny fa fihetsika tandindona fotsiny, fomba fitsaboana ivelany ihany ka manaloka ny tena olana :
Efa natombony io governemantany io ary nanan-kery rehefa hitsidika ny trano fandraisana ireo vehivavy iharan'ny herisetra [ny Praiminisitra Francois Fillon]. Tsy hisy afa-tsy vehivavy mainty hoditra mitrotro zaza no hasehony antsika eo. Ao amin'ny firenena iray izay ahitàna fahafatesana vehivavy iray isaky ny efatra andro noho ny vono ataon'ny vadiny azy, azontsika araka izany fa mihatra amin'ny vahoaka rehetra ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Ao amin'ny firenena izay 10%-n'ireo vehivavy no milaza fa voadaroka (raha ampitahaina amin'ny 4.2% amin'ny an'ireo vehivavy mpifindramonina), [vono anaty tokantrano] dia tsy hoe ny vehivavy mpifindra monina ihany no voakasik'izany. Na ataoo aza oe voadaroka daholo ireo vehivavy mpifindra monina, tsy hahatratra 10% mihitsy.
Izay no atao hoe Frantsa ankehitriny, Frantsa an'i Rachida Dati. Zanaka vavy avy amin'ny fianakaviana iray niteraka zaza 12 avy aminà ray aman-dreny tsy nahay namaky teny sy nanoratra .Raha nanana Minisitry ny fitiavan-tanindrazana isika tamin'ny 50 taona lasa, moa ho Minisitry ny Fitsarana ve i Rachida Dati ? Moa nahazo taratasy fahazoana hipetraka ao ve ireo ray aman-dreniny izay tsy nahay niteny frantsay akory ? Kanefa ankehitriny, lasa solontena Arabo manafina ny tena olana izy.